Korintofo I 3 NA-TWI - Onyankopɔn asomfo - Nokwarem, anuanom, - Bible Gateway
Korintofo I 2Korintofo I 4
Korintofo I 3 Nkwa Asem (NA-TWI)
3 Nokwarem, anuanom, mantumi mankasa mankyerɛ mo sɛ nnipa a wɔwɔ Honhom no. Na ɛsɛ sɛ mekasa kyerɛ mo sɛ wiasefo a wɔte sɛ mmofra a wɔwɔ Kristo mu gyidi. 2 Memaa mo nufusu. Mamma mo aduan a ɛyɛ den, efisɛ, na enye mma mo. Na mprempren ara mpo, enye mma mo, 3 efisɛ, moda so te hɔ sɛ wiasefo. Sɛ anibere wɔ mo mu na mutwa mo ho ne mo ho mo ho nya akasakasa a, ɛnna no adi sɛ moyɛ wiasefo a mote hɔ ma wiase? 4 Sɛ obi ka se, “Me de, midi Paulo akyi” na ɔfoforo nso ka se, “Me nso mewɔ Apolo afa” a, ɛnkyerɛ sɛ moyɛ wiasefo anaa?